SOMALITALK - NUURUDDIIN
Nuuruddiin Faarax waa Salmaan Rushdi Saaxiibkiis
Intaadin yaabin ama cararin bal kaadso, hortaa baa layaabay. Waxaan maqlay muddo toban sano kahor ku dhow Nurrudin Farah oo "Nobel prize" abaal marin qaali ah oo waliba caalami ah loo qalqaalinayey oo uu ku mutaystay qoraaladiisa. Iyadoo halkaas ay ii joogto oo aan is leeyahay reerkaan Soomaali dhinacaa waa ka tabar daraayeen ee malaha waaba loobaahnaa in lahelo qoraa caan ah. Iyadoo waliba xilligaas kusoo aadaysa xilli ku dhowaad toban kale la dowlad la'aa.
Waxay ahayd dhowr sano ka hor markii uu Nuruddin soo gaaray magaalo aan joogay, maalmo kadib waxaa darbiyada ku dhagenayd waraaq lagu xayeysiinayo inuu jiro buug saxiix oo qoraagu u saxiixayo qofkii buugiisa gata. Dabcan in buuga la daah furo, laga hadlo ama wax laga waydiinayo ama qoraaga laftiisa la arkana meesha kama marna. Waraaqdii markaan akhriyey ayaa waxaa ku qoran buuga magaciisa iyo meesha iibintu ka dhacayso ka dib, hadalo uu leeyahay Gaalkii waynaa ee "Salman Rushdie", dabcan cidna sharax ugama baahana ayaan filayaa.
Salman Rushdie waxa uu Nuuruddiin ku aamaanay in uu yahay "Mid kamid ah kuwa ugu wanaagsan Qorayaasha Noofelada ee Casriga la socda ee Afrikaanka ah". Sidaas waxaa qortay shabakada commonwealthclub.org, oo intaas ku dartay in Nurruddin Faarax uu wax ka qoro sheekooyinka dumarka, uuna ku guulaystey billada loo yaqaan Neustadt International Prize." intaa markaan arkay ayaa waxaa iisoo baxday Mudane Nuraddin inuu aqbalay Salmaan amaantiisa uuna walibana qarsanayn ee in ninkaas ka hadlay buugtiisa ayaaba dadka lagu soo jiidanayaa (khaasatan dadka ku hadla ingiriisiga) qoraasha badanaa buugtooda dadka dib u eega khaasatan kuwa magaca leh ama hay’adaha waxbarashada sida Jaamacadaha ayey isku xayeysiiyaan. Hadalka Salmaan yiri waxaa aad ula booday in badan oo ka mida warbaahinta reer Galbeedka taasoo xayeysiis iyo taskiyo u noqotay Nuruddin.
Weel walba wixii kujiruu dhiddidaa
Hadalkaan wuxuu ahaa maah maah carbeed oo xikmad badan xambaarsan, waxaan filayaa inay lamacna ahayd "Qoriba qiiqiis ayuu uraa" Waxaan oran karaa waa hordhac hadalkaan inuu Nuruddin ku jeesjeeso xijaabka ama Ayaada ka hadlaysa.
Intaynaan hadalkiisii wax ka taaban Nuruddin xataa waxaa todobaataneeyadii oo ahayd markii uu kusoo biiray caalamka qoraalka ay ku tilmaameen nimow naag qaar kamida akhristayaashii buugii matalaada ahaa ee uu baxshay (FROM A CROOKED RIB) sida uu' u matalay oo gabar reer baadiya ah oo laguday isaga dhigay, ("Ms Farah" feminist'').
Nuruddin oo buug cusub oo uu qoray kahad layey Febraayo 08, 2007, kulan lagu qabtay meesha lagu magacaabo "The Loft Literary Center" oo kutaala Magaalada Minneapolis, halkaas oo ay isugu yimaadeen dad badan oo aan Soomali ahayn balse Somali ku jirtay, ayuu hadalkiisii kusoo daray xijaabka ay xirtaan gabdhaha Soomaaliyeed. Markuu ka hadlayey dumarka Soomaaliyeed wuxuuna yiri; " Gabdhaha Soomaaliyeed in badan oo kamida waa wanaag san yihiin, waana ku faraxsanahay……. Laakiin marmarbaan waxaan ka xumaadaa xirashada ay xiran yihiin dharka Sacuudi Caaraabiya, waxay xiran yihiin dhar aanan lahayn… kadibna waxay igu yiraahdaan waa dhaqan kayagii, ma’ahan dhaqankayagii, malihin Shuko, xaqiiqadu waa sidaa………(isagoo sii hadlaya wuxuu yiri) sababtuna waxay tahay illaahay wuxuu yiri is astur, mase dhihin xiro dharka afqaanta…. Arimahaas waa kuwa aan daneeyo, waxaan rabaa hal qof oo Soomaali ah oo istaaga oo yiraahda Shuko, Niqaab kuwaasoo dhan waa dhaqankeena? Ma'ahan, ma'ahan; Dhab ahaantii markaan qoray buugaygii ugu horeeyey, gabadhii lagu matalayey "Cebla" markay aragtay gabar xiran xijaab way ka carartay, maxaa yeelay waxay u malaysay CIRFIID! Waligeed ma aysan arag dumar carbeed oo shuko kor iyo hoos qaba. Labaatan ilaa sodon sano kadib carabtii waxay ka tageen lacag badan si ay u ISLAAMEEYAAN Soomaalida……… miyaanan illaahay ka cabsan Karin inagoo Muslim ah oo aan wadan ganacsigaan Afqaaniga ah"
Intaa kadib waxaa xusid mudan in gabar Soomaaliyeen oo goobtaa fadhiday ay si wanaagsan ula garnaqsatay Nuruddin una ridisay si cilmiyeysan, taasoo uu qoraagu mahad caalwaa ka celiyey. Hadaladeediina waxaa ka mid ahaa "Quraanku wuxuu doonayaa inay dumarku korkooda Xijaabaan. Dumarka Soomaaliyeed xor ayey u yihiin inay doortaan sida ay uturjumayaan inay u xirtaan dharkooda Islaamiga ah. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso in dumarka Soomaaliyeed dhibaato kasoo gaadhay dagaaladii sokooye, qaarkood waxay joogaan Waqooyiga America iyo meelo kaleba. Dumarku xijaabka ay xiran yihiin wuxuu ka difaacaa waxbadan oo dibada kaga iman lahaa, sidoo kale wuxuu jirka uga yahay difaac waxyaabo badan. Sidee baa doonaysaa inaad u fahanto kalsoonida ay haystaan dumarka iyo raga Soomaaliyeed, taasoo aysan heleen hadaan ilaahay ilaalin iyo hanuun siinayn…… Waxay xor u yihiin in ay u qaataan xijaabka sida quraanku dhigayo...."
Maxaa kuu baxay akhristow, waxaan ukala qaadaynaa hadalkiisa afar qaybood;
Dhar Carbeed (Dharka Sacuudi Caraabiya), Dharka Afqaanta.
Si ay u ISLAAMEEYAAN Soomaaliya
Dhaqanka Soomaaliga ah
Ku jeesjeesid Xijaabka ama ( Ayaada Quraanka ee ka hadlaysa Xijaabka)
Dhar Carbeed (Dharka Sacuudi Caraabiya), Dharka Afqaanta
Dhegeyso Aayyadda 59aad ee Suuradda Al-Axsaab (waxaa akhrinaya Sheikh: Baset)
Nebiyow ku dheh Haweenkaaga iyo Gabdhahaaga iyo Haweenka Mu'miniinta isku dada Shukadiinna, taasaa idiinku dhow in la idin aqoonsado oon laydin dhibine., Eebana waa dambi dhaafe Naxariista ah. [Axzaab 33:59]
Ugu horayntii waxaad dareemaysaa sida Nuruddin ay uga maqantahay inaan lakala lahayn ama qolo gooni ah loo tiirin Karin Shacaa'irta Diinta islaamku latimid. Sida; Xijaabka, Garka, Raga oo marada gaabsada, Cimaamada, Koofiyada ama Cibaadada qaarkood sida Xajka iyo Ciidaha. Waxaa noo cadaynaya siduu qoraagu uga arradan yahay Dhaqamada Islaamka wuxuu kulmiyey Sacuudi, Afqaanistaan iyo Soomaalida. Su'aashu waxay tahay hadaan Xijaabka siino Carabta ama Sacuudigaba maxaa Afqaanta u geeyey?. Maxaase anaga noo keenay waxaan nahay Afrikaan (Sida qoraagu hadalka u dhigay)? Maxay tahay calaaqada naga dhaxaysa kuligeen?.
Jawaabtu waa koobantahay waana fududahay wolow qoraagu arki waayey ama iska khaafinayo. Kuligeen waxaan nahay Islaam waxaana nawada hagaya Quraanka iyo Hadalka Nabiga, sida ilaahay u amray Nabi Maxamed (NNKH) markuu lahaa " Hooy Nabiyow waxaad fartaa Xaasaskaaga, gabdhahaaga iyo Gabdhaha Muslimaadka korkooda inay ka raariciyaan Jalbaabkooda, Sidaasaa u dhow in lagarto (inay muslimaad yihiin) oo aan la dhibin, ilaahayna wuxuu ahaaday mid danbiga dhaafa oo naxariista" (Axsaab 33:59). Waxaan filayaa inay tahay jawaab aan wada fahmi karo. Hadaan Su'aal dib ugu celino Nuruddin miyaanay gabdhaha Soomaaliyeed ku jirin kuwa ilaahay lahadlayo sida macnaha aayada kore sheegayso?.
Waxaa dad badan oo joogay goobta ama dabadeed maqlay layaabeen weedhaha oranayey "Labaatan ilaa sodon sano kadib carabtii waxay ka tageen lacag badan si ay u ISLAAMEEYAAN Soomaalida" waxaa markiiba kugu soo dagdagaysa awal miyaanan Islaam ahayn?. Waxaa taariikh-yahannadu sheegaan in Soomaaliya Islaamku soo gaaray Xiligii Saxaabadii Nabiga (scw) ay usoo hijroodeen Ardul Xabasha oo loola jeedo (dhulka dadka madow) oo aan inagu ka mid nahay. Sidoo kale taariikho kale ayaa sheegaya in xiligaas wa xoogaa kadib uu islaamku soo gaaray. Waxaanse muran lahay khilaafooyinka Islaamka in xukunkoodii soo gaaray. Sidoo kale waxaan muran lahay iyadana in Qarnigii 7aad iyo kii 8aad ee Hijriyada labadaba Taariikhyahaniintu wax ka qoreen Soomaaliya sida "Ibnu batuuta" iyo Shiikha leh Mucjamul Buldaan.
Waxaa lagu fasiray qoraaga hadalkiisa inay dhici karto inuu qoraagu taariikh khaldan hayo maadaama uu wadanka Soomaaliya waxbadan ka maqnaa ama uhaysto waxkasta oo carabtu sameeyaan gaar ahaan Sacuudiga inay iyaga dhaqan u tahay. Waxaa is waydiin leh sida Nurruddin uu'u ilowsan yahay in Makka iyo Maddiina aysan ahayn oo kaliya Sacuudi Caraabiya. Waxaan xasuusin lahaa in Makka ay ku taal kacbada ay Muslimiintu ula jeestaan Salaadahooda meelay joogaanba, in Loo Xajiyo Xageeda, in Quraanka Lagu Soo dajiyey, in Maddiina Nabigu u hijrooday kuna aasan yahay iyo inay yihiin meelaha Aduunka aan hada ku noolahay ugu Fadliga Badan uguna Barakada badan. Hadaba hadii arinku sidaa yahay qoraaga waxaan filayaa inay u cadahay xiriirka naga dhexeeya umadaha inuu yahay mid diimeed ee uusan ahayn dhaqan qolo kale oo naloo soo meeriyey. Sidoo kalena inaan 30 sano ka hor nala islaameen ee aan illaahay mahadii horay islaam u ahayn.
Marka laga hadlayo dhaqan ama Caado waa arin umadi laasimto, intabadana ay iska dhaxasho, dhaqanku wuxuu kujiraa waxyaabaha aan caalamka la iskula yaabin la iskuna tixgaliyo. Sidoo kale wuxuu ku jiraa waxyaabaha aadka la isugu khilaaf sanyahay. Caadadu waxay leedahay qaar xun iyo qaan wanaagsan. Jiilkasta wax ayuu kusoo kordhinayaa dhaqanka waxna waa ka lumiyaa. Shaki malahan in badan oo Soomalida dhaqankeeda ka mida in uu wanaagsan yahay sida; Marti soorka, Bixinta Maganta, U turida Dumarka iyo dadka Jilicisan. Dhaqamadaas qaarna waa lumeen sida bixinta Maganta iyo U turida Dumarka iyo dadka jilicsan, Qaarna wali wax baa ka baaqi ah sida Soorida Martida. Dhinac dharka xiligii hore ee la dhar la'aa waxaa la xiran jiray "Dhuu", xilligii dharku yimidna waxaa laxiran jiray " Boqor iyo Dhacle" laba maro oo cad cad, xiligii dharku soo batay ama la reer magaaloobay waxaa la xiran jiray "Guntiino iyo Garbasaar", xiligii ka danbeeyeyna waxaa la xiran jiray " Beermaqariye iyo Dh. Jabuuti iwm". Xiligii kadanbeeyey iyo hadana waxaa loobadan yahay "Jalbaab; Xijaab" waxaa lasoo maray intaas oo marxalo oo kala duwan, hadaba Su'aashu waxay tahay keebaa dhaqan Soomaali ah oo Soomaali leedahay? Ma "dhuuga mise Jalbaabka?".
Waxaan filayaa in marxaladaas lasoo maray oo dhan aanan dhihi Karin kuli waa dhaqan ama caado, ee waa xaalado kala duwan oo midba xili lasoo maray. Markaan isu gayno xaaladahaas oo dhan Jawaabtu waxay noqonaysaa waxaa dhaqan noo ah wixii Diintu na amartay ama waafaqsan shareecada Islaamka. Sidaas ayuuna Xijaabku ku noqonayaa dhaqanka gabdhaha Soomaaliyeed leeyihiin ama dharka gabdhaha Soomaaliyeed leeyihiin ee hada caanka ay kuyihiin dunidaan aan joogno. Waxaa arintaas sii xoojinaya Xilligii Nabiga (scw) lasoo diray Carabi waxay lahayd dhaqamo badan oo kala duwan, qaarna waa loo Islaameeyey qaarna waa laga tuuray. Dhaqankii xumaada waa latuurayaa muran la'aan.
Ku jeesjeesid Xijaabka ama (Ayaada Quraanka ee ka hadlaysa Xijaabka)
Intaynaan ugudbin Nurruddin hadalkiisa, aan ku yara nasano guudmar yar oo Xijaabka kusaabsan.
Ugu horayntii waxaa haboon inaan hoosta ka xariiqno in Xijaabku uusan ahayn dhaqan qolo leedahay ee uu yahay amar illaahay oo muslimiinta oo dhan waajib ku ah inay fuliyaan. Muran malahan in umada Soomaaliyeed ay dhaqan galiyeen Xijaabka xili danbe ilaahay ajar ha kasiiyee cidii sababta u ahayd, ka daahida dhaqan galinta xijaabkana waxay laqabeen Soomaalidu Caalamka Islaamka oo markii ay burburiyeen khilaafadoodii Islaamka Gumaysigii qabsaday siduu rabo ka yeelay. Iyadoo sidaa ay tahay ayaa hadana Soomaalida lagu tiriyaa guud ahaan Wadamada Islaamka, wadanka ugu horeeyey ee wadan ahaan Isxijaabay ama uu Xijaabku uga dhaqan galay si waafi ah, wallow ay wax yar ka dhiman yihiin wali.
Maxamed Dheere vs Xijaabka- 2004
Nooca Xijaabka Soomalida ee hada ay Caanka ku yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ayaa waxaa sabab u ahaa ragii iyo gabdhihii dacwada ka waday Soomaaliya 70 tameeyadii. Waxaa igu maqaale ah inuu wali nool yahay ninkii lahaa fikrada qaabka uu'u tolan yahay iyo gabadhii ugu horaysay oo xirata. Waxaad dareemaysaa marada ay u dooreen iyo qaabka ay tolmadiisa u qoondeeyeen inuu yahay mid xeel dheer marka loo fiiriyo dhaqanka Soomaaliga oo ahaan jiray "hoodi dalaq" ama isla noolaanshaha qaraabada kala ajnabiga ah oo ay duruuftu sababtay. Sidoo kale dhinaca Bii'ada oo uu xijaabku doorwayn ka ciyaarayo Xifdinta iyo xanaanaynta jirka gabadha Muslimka ah. Mar waa Labis, marna waa gogol, marna waxaa lagu xanaanaynaa ubadkii oo loo gogli ama lahuwin.
Intaas oo dhan waxaa isku fuuqsaday sida uu'u waa faqay ayaada quraanka ee aan kor kusoo xusnay ee ka hadlaysa Xijaabka. Marka laga yimaado Culimada Soomaalida, Waxaa Caalamka Islaamka wax laga yiri Xijaabka Soomaalidu xirato oo ah nooc ay iyagu alifeen, waxaana loo kala harin inuu yahay Xijaabkii saxda ahaa ee Quraanka iyo Sunada lagu sheegay. Waxaa ka hadlay culimo waawayn oo cidwalba leh kuwa sucuudiguba ha ugu badnaadeen'e.
Xijaabka Sucuudiga laga xirto iyo kan Soomalida isma shabahaan isumana eka, kan Sucuudigu waa Shuko khafiif ah iyo indha shareer. Soomaalidu kaas waxay u yaqaanaan "Buubuu" xijaabna uma yaqaanaan ee gabdhaha ayaa guriga kujooga, ama waxaa qaata kuwa markaas uun xijaabka soo fahmaya oo bilowga ah, ama kuwa sii diciifaya oo hoos u socda. Kan Afqaaniga waan isu yara dhownahay, waana kala duwanhay koodu waa isku days, mana garanayo adaygiisa iyo khafiifkiisa laakiin wuxuu u muuqdaa Xijaabkii Sharciga ahaa. Keena waa "Toob ama Canbuur Gacmo dheere ah oo hoos laga qaato iyo Jilbaabka kore oo la raariciyo" waana isku maro waana isku midab badanaaba. Ilaahay haka abaal mariyee, waxaa sabab u ahaa xijaabka noocaan u tolan in uu Soomaaliya iyo meelo kaleba ku baaho culimada Soomaaliyeed.
Haddaan usoo noqono jeesjeeskii Nuruddin wuxuu yiri: "Dhab ahaantii markaan qoray buugaygii ugu horeeyey, gabadhii lagu matalayey "Ceebla" markay aragtay gabar xiran xijaab way ka carartay, maxaa yeelay waxay u malaysay CIRFIID!," waayo "Waligeed ma aysan arag dumar carbeed oo shuko kor iyo hoos qaba".
Marka hore aan yara akhrino buugaan wax kamida;
Ceebla, agoon siddeed-iyo-toban jir ah, waxay ka fakatay baadiyihii ee reer guuraaga Soomaalida markii ay ogaatey in awowgeed uu ballan qaaday in uu u guurinayo nin da'weyn. Laakiin markii ay u fakatay Muqdishu, waxay is aragtay in aysan wax awood ah lahayn islamarkaasna ay ku tiirsanaato niman sidii ay ugu tiirsanayd markii ay duurka joogtey oo kale. Dhexjibaaxii adeegidda, guurka, faqriga iyo rabshadaha, Ceebla waxay ku dagaalantay in ay ilaashato sharafteeda, iyadoo ku jirtey adduun ah meel dumarka 'loo iibiyo sida lo'da'. Ayuu qoray Nuruddin Farah oo arrinta ka eegaya aragtida dumarka, Novel-kiisii ugu horeeyey oo ahaa mid weeraraya dhaqanka dadkiisa. Sidaas waxaa qortay shabakada Penguin.co.uk oo ka hadleysey buugga uu Nuurudiin Faarax qoray sannadkii 1970 ee cinwaankiisu yahay: From a Crooked Rib [oo la macne ah "ka timid Feer Qalloocan"].
Nuuruddiin Faarax buuggaas ugu horeeyey ee uu qoray 1970kii waxa uu jeldiga sare u xushay sawir gabar ay "Kalxantu" muuqa, taas oo loo fasiray in qoraagu u qaatay in feerta qalloocan ay tahay taas, balse feerta dumarka laga abuuray sida saxda waa tan Soomaalidu u taqaan "Feer Yaro".
Nuruddin wuxuu tixraac ka dhigtay buugii matalaada ahaa (Sheeko la mala awaaley oo lajilo) waxaad dareemaysaa qaabka uu'u hadlayo in isaga iyo dhaqanka Islaamka uu darbi u dhexeeyo. Taas macnaheeda ma'han inaan difaacayo wax yaabo qaldan. Laakiin dhaqanka Islaamka waxaa kamida in gabadha waligeedu u doori karo say wanaagsan oo u qalma hanana kara dhinac kasta. Sidaas daraadeed ayaa shareecadu waxba kama jiraan ka soo qaaday guur aan wali lahayn.
Jeesjeeska Nuruddin ayaa ah inuu ku tilmaamay gabadh xijaaban inay tahay Cirfiid (waa nooc jinka kamida) isagoo sii hadlayana wuxuu yiri waxay uga carartay waligeed marag wax qaba shuko kor iyo hoos. Halkaas markuu marayey wuxuu ku tuntay ayaada kor aan kusoo xusnay oo oranaysa (……..korkooda inay ka raariciyaan Jalbaabkooda…..) hadaba waxaa is waydiin leh, Nuruddin arintaan Islaanimadiisa maxay u dhimaysaa? Majaahilnimaa arintan ka keenaysa mise waa sida uu rumaysan yahay? Muxuuse noqonayaa xukunkiisa Islaam ahaan?
Su'aalahaan oo dhan waxaan u daynayaa culimada Soomalida oo ehelka u ah fatwadeeda inay jawaab ka bixiyaan. Waxaase in badan culimada ka maqalay qofkii ku jeesjeesa Quraanka iyo Axaadiista Nabiga (scw) inuu ku gaaloobayo.
Magacyada Buugaagta uu Qoray Nuuruddiin Faarax, ka akhri halkan....
Gabagabadii waxaa aad looga hadal hayaa Magaalada Minneapolis meelaha la isugu yimaado weedhihii Nuruddin, dadka intiisa badana waxay leeyahay "Qoraa barasha wanaagsan sidaan kuu haysanay ma'aadan noqon," qaarna si kale ayey leeyihiin oo "qoraagu wuxuu lahadlayey akhristayaashiisa aan Soomaalida ahayn."
Hadaan dhinac kale ka eegno waxaan qabaa waa fursad wanaagsan oo uu qoraagu isu kaaya baray sidii saxaafadu horay noogu bartay si aan ahayn markii ay lahayd (Qoraa Soomaaliyeed oo Bilad Caalami ah helay). Waxaana adkeeyey inaan horay qoraaga u barano wuxuu wax ku qori jiray luuqada dadkiisu ku hadlo midaan ahayn. Hadase waxaa sahlaya qaxii kadib waxaa labartay luuqado badan oo ay ka midtahay miduu isticmaalayey. Isku soo xooriyoo qoraaga waxaa inooga filaatay taskiyada iyo amaanta uu siiyey Salman Rushdie iyo sida uu ugu faraxsan yahay oo uu buugta ugu xayeysiisanayo. Hadaba akhristow nin ay damqi wayday Nabi Maxamed (scw) Caydiisii, Jalbaab xagee joogaa?. Nuruddin waa Salmaan Saaxiibkiis.
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 16, 2007
Isha sawirada: Wikipea, googleimages.
Sharcigii Jacques Chirac ee Dugsiyada Faransiiska Lagaga Mamnuucayey Khimaarka